ရောင်​နီဦး: အစားအသောက်များတွင် ပါဝင်သော ဓာတ်များ
အစားအသောက်များတွင် ပါဝင်သော ဓာတ်များ
နေ့စဉ်စားသောက်နေတဲ့ အစားအေသာက်တွေထဲမှာ ဓာတ်တိုး ဆန့်ကျင်တဲ့ ဓာတု ဒြပ်ပေါင်း ပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာ antioxidant-rich meals တွေပါဝင်သလို အချိုဓာတ်များပြီး သွေးချိုကို မြင့်မားသွားစေနိုင်တဲ့ အစားအသာက်များလည်း ပါဝင်ပါတယ်. . မိမိနေ့စဉ် စားသောက်ရာမှာ ဘယ်အစားအစာမှာဖြင့် ဘယ်လိုဓာတ်မျိုး ပါဝင်တယ် . . . . စားသင့်၊ မစားသင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုက်၊ မကိုက် ချင့်တွက် နိုင်ဖို့ ဓာတ်သဘာဝ အုပ်စုအလိုက် ဖော်ပြလိုပါတယ်. . .
ကောင်းသော ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ပါဝင်သော အစားအစာများ (Good Carbohydrates)
ကညွတ် ၊ ပဲတောင့်၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ နက်ပြာရောင် ဘလူးဘယ်ရီသီး ၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ သံပရာမျိုးဝင်အသီးများ ၊ သခွားမွှေးသီး၊ ကီဝီသီး၊ အစိမ်းရောက်ရှိသော ဟင်းရွက်များ၊ မက်မွန်သီး၊ သစ်တော်သီး ၊ မက်မန်းသီး၊ ဒေါက်ခွရွက်၊ ကော်ကဲ့သို့ ချွဲပျစ်မှုမရှိသော ဟင်းသီးဟင်းရွက် အမျိုးမျိုး စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်. .
ဆိုးသော ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် ပါဝင်သော အစားအစာများ (Bad Carbohydrates)
ငှက်ပျောသီး၊ ပေါင်မုန့်၊ မုန်လာဥ၀ါ၊ သကြားပါသော ကွေကာအုပ်၊ ဂျုံ၊ ပြောင်း၊ အသီးဖျော်ရည်များ ၊ သရက်သီး ၊ကြက်ဥ၊ နွားနို့၊ ဂျုံမှုန့် ရောမွှေကြော်ထားသော မုန့်၊ သဘောင်္သီး ၊ အာလူး၊ ဆန်(ထမင်း)၊ သကြား၊ အီတလီခေါက်ဆွဲခြောက် ၊ အိုးကင်းနှင့် ဖုတ်ရသော မုန့် စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်. .
ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်သည့် ဓာတုဒြပ်ပေါင်း ပြည့်ဝသည့် အစားအစာများ (Antioxidant Best Bets)
ထောပတ်သီး၊ ဘယ်ရီသီး၊ ငရုတ်ကောင်း၊ သခွားမွှေးသီး၊ အစိမ်းရင့်ရောင် ရှိသော ဟင်းရွက်(ဥပမာ-ကိုက်လန်ရွက်) လိမ္မော်သီးအရောင် (အ၀ါရင့်ရောင်)ရှိသစ်သီးဖျော်ရည်များ ၊ နာနတ်သီး ၊ဆာလ်မွန်ငါး (အစိမ်း၊ အကင်၊ အပြုတ်) ၊ ခရမ်းချဉ်သီး တို့ ဖြစ်ပါတယ်. .
Posted by YaungNiOo at 9:32 PM
Meet mudskippers လို့ ခေါ်တယ့် ရေတပိုင်းကုန်းတပိုင်...
ကျန်းမာရေးနှင့်အလှအပအတွက် အထောက်အကူပြုသော မာလကာသီး...
AIDS ရောဂါပိုးကိုနိုင်သည့် တိုင်းရင်းဆေးနည်း
ကိုယ်တိုင်လည်းဖက် တစ်ဆင့်လည်း မျှဝေပေးကြပါ
စမတ်ဖုန်း ပေါက်ကွဲမှု တွေ မဖြစ်အောင် ရှောင်ကြဉ်သင့်...
Sim card lock ကျ ရသောအကြောင်းဗဟုသုတပါ
မုန်းနေသူ ကို ချစ်စေလိုလျှင်
မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကို ဖောက်ထွင်း မြင်ချင်ပါသလား?...
အမည်းရောင် ခရမ်းချဉ်သီး အနီရောင်ထက် ကျန်းမာရေးအတွက...
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ကားမောင်းနိုင်တဲ့ ခွေး
သီရိလင်္ကာမှာ ငါးမိုးရွာသွားတဲ့ဖြစ်ရပ် သက်သေ
အရေးမထာမှု့(သေးသေးလေး) မှ ကြီးကျယ်သော ဆုံးရုံးမှု့ ကြီးသို့ ပြောင်းလဲသွားသည့် (အကြီးအကျယ် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့) အဖြစ် ရောက်ရှိရသည့် အြေ...